ममताकी खानी सुमित्रा – Krishna Thapa
बादल उठी अकाश ढाक्यो मेघ पनि गर्जियो !
थिएन ओत ढाकिगो देश असिना बर्षियो !!
अविरल सिर्जनाका कोशेलीहरु पस्किएर सामाजिक संजालहरुमा बाँडिरहने र प्रवास वसाइको यो व्यस्तताको वावजुद पनि हरपल साहित्य सिर्जनामा रमाइरहने साहित्य साधिका सुमित्रा पौडेलसँग जब प्रत्यक्ष साक्षात्कार भयो, त्यसपश्चात मैले लेखिकाभित्रको सुकोमल भाव जस्तै व्यवहारमा पनि अझ सरल, मृदुभाषी र ममतामयी व्यक्तित्वका रुपमा पाएँ ।
कथा कविता गीत गज़ल सबै प्रकारका रचनाहरु पढेको छु मैले, सुमित्रा पौडेलका हरेक रचनाहरु भित्र सघन विचार, हार्दिक गहिराइ र उच्चतम चेतना प्रवाहित भएको महसुस गरेको छु, जीवन बगेको महसुस गरेको छु । साहित्य सिर्जना त्यस्तो सरल छैन जो भावुक भएर कुनै प्रेमीले प्रेमपत्र कोरेजस्तो होस् यद्यपि ती हृदयमै बग्ने भावनाका वेगहरु नै हुन् तर जसलाई चिन्तन, कला, सौन्दर्य, विचार र चेतनाका परिधानहरुले बिम्बहरुले सजाउछ लेखक । यो तथ्यलाई लेखिकाले स्पष्ट मनन गरेकैले पनि उनका सिर्जनाहरुमा तिनको विशिष्ट संयोग म पाउँछु ।
धेरै अगाडी आध्यात्मिक बिषयको एउटा कृति पस्किएर लेखिकाको रुपमा उभ्याई सकेकी साहित्यकार पौडेलका सिर्जनाहरुको सबभन्दा जीवन्त तत्व सरलता र स्पष्टता हो, ती नितान्त प्राकृतिक छन जसमा कृत्रिमताको लेश सम्म लागेका छैनन् । ती निकै भावनात्मक छन, मार्मिक छन र लयात्मक छन । ती जीवन भोगाई र समयका जिउँदा जाग्दा परिवेशका चित्रहरु हुन्, नियति र परिस्थितिका प्रतिबिम्बहरु हुन् ।
प्रवासभूमि इजरायलबाट धेरै कृतिहरु प्रकाशित भै रहेका छन, यो उपस्थितिले डायोस्पोरिक र मूलधारको साहित्यमा स्थान बनाउदै लगेकोमा हामि जति खुसि भएका छौं, त्यति नै हामीले पस्कने साहित्यको स्तरीयतामा सचेत हुनु जरुरी छ । ममताको आंचलभित्र समाहित मर्मस्पर्शी भाव र लोक लयमा आधारित यी मिठा काव्य बान्कीहरुमा हराई सकेपछि म विश्वस्त छु यो कृतिले नेपालि साहित्य भण्डारमा एउटा महत्पूर्ण कोशेली थप्नेछ ।
इजरायलको सडक किनारमा उभिएका रुखहरुमा फूल फुल्नु, झर्नु या ऋतुले परिवर्तनका रंगहरु बोकेर ल्याउनु यी सामान्य प्रक्रिया हुन् समय र मौसमका । जसमा अभ्यस्त भैरहँदा कतिपय आँखाहरु छेउका खेल उद्यानहरुमा रोकिएर टोलाएको देखेको छु मैले । सप्ताहान्तको विदा मनाउन लेविन्स्किको चिल्ड्रेन पार्कमा निस्कदा पनि आफ्ना घरका लालाबालाको ममतामयी सम्झनामा भित्र भित्र भक्कानिएका कति मनहरु होलान, कति आँखाहरु रसाएका होलान ? मातृत्व र ममताको यो कारुणिक चित्र विदेशिएका चेलीहरुको आँखा भरिभरि कुँदिएका छन ।
नारी मनको यो परिवेश, यी रसिला आँखाहरु र सुमित्रा पौडेलको कृति ममताको आंचल बीच एउटा भावनात्मक निकटता अनायास महसुस गर्छु म । कुन आमालाई मन हुन्छ, ममताको आँचल रित्तो रित्तो बनाएर परदेशको यात्रा गर्न ?
बर्बर आँसु झार्दछिन् आमा बोल्न नि सक्दिनन् !
छल्कन्छ भित्र ममता खानी खोल्न नि सक्दिनन् !
हे प्यारी छोरी ! नभन त्यसो निष्ठुरी छैन मन !
भविष्य तिम्रै सोचेर आएँ सुखलाई हैन धन !!
शिर्षक र परिवेशलाई यसरी जोडी दिएँ मैले, यद्यपि ममताको आँचल काव्य संग्रह एउटै बिषयमा मात्र केन्द्रित छैन । प्रेम,सौन्दर्य, मातृत्व, वियोग, विवशता, राष्ट्रप्रेम, विद्रोह जस्ता सबै खाले बिषयहरु समेटिएका छन यो संग्रहमा । इजरायल भूमिको डायोस्पोराबाट सिर्जित कृति “ममताको आँचल” र ममतामयी सर्जक सुमित्रा पौडेललाई लाख शुभकामना ।
अरुङ खोला र आइतबारे रहस्य